ကျွန်တော်တို့ကိုအဘို့, စကားလုံး "စိတ်ခံစားမှု" နှင့် "ခံစားချက်များကို" တဦးတည်းအယူအဆနှင့်အတူနီးပါးပြောရလျှင်များမှာ - ငါတို့သည်အတွင်း၌ခံစားရဆိုတဲ့အချက်ကို။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့အတွက်ရှုပ်ထွေး စိတ်ခံစားမှု များနှင့်ခံစားချက်များကို - ဤဝေါဟာရများကိုအကြားလိုင်းဆွဲရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ကစာမတတ်ပဲတဲ့ပုံပါပဲ။
စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ခံစားချက်များကိုများ၏ခြားနားချက်များအားရှင်းလင်းထားသည့်အတွက်အဓိပ္ပာယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူစတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ခံစားချက်များကို - ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးလူ့ဆက်ဆံရေးဟာရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေကအကဲဖြတ်နေကြသည်။ သဘောထားက - တာရှည်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း - တိုတောင်း။ ထို့ကြောင့်, ပထမဦးဆုံးခြားနားချက် - တရားဝင်မှု၏ကာလ။
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်စကားရပ်၌, ခံစားခကျြနဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုလည်းကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသတိထားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါတို့သည်သူတို့သတ်မှတ်နိုင်သည် - စသည်တို့ကိုမတ်ေတာ, အမုန်း, ပျော်ရွှင်မှုကို, မာနထောင်လွှား, ငြူစူခြင်း, ဒါပေမယ့်စိတ်ခံစားမှုကျွန်တော်ပိုပြီးမရေဖော်ပြ။ သင်ဖြစ်ကြောင်းပြောတဲ့အခါယခုသင်ကြုံနေရနေကြတယ်ဆိုတာကို "ဦးနှောက်အနာဆိုး"? ယားယံခြင်း, အမျက်ဒေါသ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ် - ဤအရာအလုံးစုံစိတ်ခံစားမှု။
ခံစားချက်တွေကိုစိတ်ခံစားမှုမှတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာအရေးပါသော်လည်း, သင်၌ရှိကြသောအရာကိုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မေတ္တာ (ခံစားမှု) သငျ့လုလင်ကိုအဘို့, အမျက်ဒေါသရန်တွေ့, ဒေါသ, အမျက်ဒေါသ (စိတ်ခံစားမှု) ၏ယခုအချိန်တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်ကြပြီ။ စိတ်ခံစားမှု - ဒီကဒီမှာနှင့်ယခုဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ ခံစားချက်များကို - ကနက်ရှိုင်း-Root တည်ငြိမ်တစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျစိတျခံစားမှုတပြင်လုံးကိုအခွအေနေတက်ထွန်းညှိမယ့်အခြေအနေမှာအထီးကျန်အရာဝတ္ထုခံစားနေကြလျှင်။
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ခံစားချက်များကို၏သရုပ်၏မျိုးတစ်ဦးကျား, မကွာခြားချက်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်အခြေခံစိတ်ခံစားမှုအမျိုးမျိုးထပ်ကွဲပြားခြားနားသောအစုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အမြိုးသမီးမြားကိုပိုမိုပြင်းထန်ဝမ်းနည်းခြင်း၏သရုပ်ကြောက်ရွံ့ခြင်း, ယောက်ျားလေ့ပိုပြီးသိသိသာသာအမျက်ဒေါသထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူများစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ခံစားချက်များကို၏တနျခိုးအဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ကြုံသူတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုသာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိကွောငျးပြောကြပါတယ်။ ထိုလူအပေါင်းတို့ကြောင့်မွေးနေ့ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသောလူမှုအခန်းကဏ္ဍမှထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဆောင်ခဲ့လေ၏။ ယောက်ျားလေးများကြောက်ရွံ့ဝမ်းနည်းခြင်း၏သရုပ်ဖိနှိပ်ဖို့သင်ယူနှင့်မိန်းမတို့သည်အမျက်ဒေါသပျော့ပြောင်း။ အဆုံးစွန်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပြုလုပ်မွေးကင်းစအမျက် ထွက်. ကလေးမွေးဖွားသည့် နေ့မှစ. ကြောင်းဖွင့်ဖို့ 1 နှစ်သက်သေပြအညီအမျှထင်ရှား။
Agnosia - မမှန်ဆုံး၏အဓိကအကြောင်းရင်းများ, အမျိုးအစားများနှင့်နည်းလမ်းများ
Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory
ရဝါးမြိုခြင်း - ကွဲပြားခြားနားသော dissimilation ၏ဝါးမြိုခြင်းထက်အယူအဆနှင့်ဇာတ်ကောင်?
Lionel Messi ၏တိုးတက်မှုနှုန်း
နေ့အစားအသောက် Ina Volovicheva
Chloe Moretz နှင့်ဘရွတ်ကလင်းဘက်ခမ်း
လက်ပ်တော့ကနေကွာခြားချက်တစ်ခု netbook ကဘာလဲ?
Auburn ဆံပင်အရောင်, 2014
Enterovirus - အဖု
Vogue အတွက် swimsuit ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးအတွက်ကယ်လီ Rohrbach
သူ့လူငယ်အတွက် Drew Barrymore
ပဲသန့်စင်သော - ကယ်လိုရီ
Homeopathy Atsidum nitrikum
ချဉ်ဖရဲသီး - ရှေးဟောင်းရုရှားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၏ဂန္နှင့်အသစ်ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဆား - လူကြီးများအတွက်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး